नेपाल आज | राजसंस्था अपरिहार्य, सैनिक ‘कू’ हुनसक्ने : कांग्रेस नेता ढकाल
राजनीतिक पण्डितहरुले मात्र होइन दलका नेताहरुले समेत मुलुकमा गम्भीर राजनीतिक दुर्घट्ना हुने आंकलन गरेका छन् । दुई तिहाइ्को सरकार भएपनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्नु, प्रमुख प्रतिपक्षी दल अस्तव्यस्त हुनु, भ्रष्टाचार र बेथितीले सीमा नाघ्नु अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल तीव्र हुनु लगायतका कारणले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था नै रहने वा नरहने प्रश्न उठेको हो ।
कांग्रेस नेता लोकेश ढकाल मुलुकको अवस्था दलहरुले थेग्न सक्ने स्थितिमा नभएकाले अब देश जोगाउन कुनैपनि अप्रिय निर्णय स्वीकार्नुपर्ने परिस्थिति आउन लागेको बताउँछन् । कुनैपनि दल र त्यसका नेता मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी नभइ आफनो मात्रै स्वार्थमा लागेकाले मुलुक धराशायी अवस्थामा पुगेको उनको बुझाई छ ।
नेकपाको सरकार चाँडै ढल्छ
नेता ढकालका अनुसार सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अपराधीहरुको झुण्ड भएको छ । कम्युनिष्टहरु आफैमा आपराधिक मनोवृतिका हुने र अझ नेकपा भित्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत सबै प्रकारका अपराध गर्नेहरुको बाहुल्यता भएकाले यसबाट मुलुकले निकास पाउने सम्भावना समाप्त भएको उनको ठहर छ ।
नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्ये प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली शक्ति केन्द्रीकरण गरेर आफू बलियो हुने दाउमा लागेका छन् । हुँदाहुँदा नेपाली सेना परिचालनको अधिकार पनि आफै लिन खोजेको देखिन्छ । उनी पार्टीमा पनि तानाशाहीरुपमा अघि बढेका छन् । आफना बिरोधीहरुलाई सिध्याउन नै उनका गतिविधि केन्द्रीत छन् ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कतिबेला ओलीको श्रीपेच आफनो टाउकोमा पर्ला भनेर आतुर छन् । ‘अमेरिकाबिरोधी वक्तव्य दिएर त्यही अमेरिका नगइ नहुने के परेछ त्यस्तो ? ’ ढकाल प्रश्न गर्छन् ।
प्रचण्ड अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको चक्रव्युहमा फसिसकेकाले उनले राष्ट्रहीतमा काम नगर्ने ढकालको तर्क छ । यी गतिविधिले सरकार चाँडै ढल्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
देउवा, पौडेल, सिटौला सबै असफल
प्रजातन्त्रको दुहाई दिने नेपाली कांग्रेस आफै अप्रजातान्त्रिक भैरहेको छ । ‘महासमिति बैठकले गरेका निर्णय उल्ट्याएर के गर्न खोजेको ? कांग्रेसको नेता हुँ भन्ने वडास्तरबाटै चुनिएर आउन डराउने ? प्रजातान्त्रिक पार्टीको नेताले अप्रजातान्त्रिक तानाशाही बन्न सुहाउँछ ?’ ढकालको प्रश्न छ ।
कांग्रेसमा सभापति देउवासंगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला लगायत सबै असफल भैसकेका छन् । पार्टीको बिचार, सिद्धान्त र आदर्श भन्दा भागवण्डालाई मात्र प्रमुखता दिने जो कोही होस त्यसले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।
अनुशासन समिति, निर्वाचन समिति र नियमावली मस्यौदा समितिमा भागवण्डा गरेर नेताहरुले लज्जास्पद काम गरे, यो दुर्भाग्य हो !
मुलुकमा पहिलो राष्ट्रवादी संस्था भनेको राजसंस्था नै हो । दोस्रोमा कांग्रेस आउँछ । राजसंस्थाको इतिहास हेरौं । आज सबैले दुत्कारेका राजा ज्ञानेन्द्रले देशभर पाइरहेको माया हेरौं । यो अवस्था कसरी आयो ? गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिकहाँ दशैंको टीका लगाउने भन्दा राजाकहाँ किन धेरै भीड लाग्छ ?
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रति छिमेकी राष्ट्रको पनि समर्थन र सहानभूति रहेकाले उनको आगमनको सम्भावना निकै बलियो रहेको ढकाल बताउँछन् । हिजो २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि जसले नेपालबाट राजसंस्थालाई हटाउन सक्रियता देखायो, त्यही शक्तिले राजसंस्थालाई पुनस्र्थापित गर्न मद्दत गर्ने ढकालको बिश्वास छ ।
सेनाको त्रास र भरोसा
अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल ब्यापक हुनु र मुलुकका राजनीतिक दल तथा नेताहरु गैरजिम्मेवार हुनुले सेनाले भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थासमेत सृजना भैरहेको छ ।
नेता ढकाल भन्छन्, ‘यदि मुलुक नै नरहने अवस्था आयो भने एकमात्र भरोसाको केन्द्र सेना चूप लागेर बस्न मिल्छ ?’
सेना आउँदा मुलुक अघि बढ्छ वा झन तनाव हुन्छ केही भन्न नसकिएपनि देश जोगाउने शर्तमा नेपाली जनताले जस्तोसुकै पीडा पनि सहनसक्ने उनको बिश्वास छ ।